मध्यम बालहरुको लागि ओम्ब। ओमेरा कपाल रङ
अब कुनैपनि केटी र त्यसपछि सुनको अर्थ समात्नको लागी उनको छवि परिवर्तन गर्दछ। यो त्यो हो, अन्तमा, व्यक्तिको सबै गुणहरूलाई जोड दिन्छ वा गल्तीहरू लुकाउन पनि, र छवि प्रतिकूल र विशेष आकर्षण पनि प्रदान गर्नेछ। र जब उनले यो सुनको अर्थ पत्ता लगाउँदा, र त्यसपछि उसको कपालको रङ परिवर्तन गर्छ।
एक उल्लेखनीय परिणाम हालैमा प्रविधि एल्ब्रो प्राप्त गर्न सकिन्छ, जुन बालको संरचनालाई क्षति पार्न सक्दैन। यो विधि फ्रान्समा आविष्कार गरिएको थियो।
यो प्रविधि 2010 मा देखा पर्यो। तर हामी विश्वव्यापी रूपमा भन्न सक्छौं कि ओब्रो धेरै अस्तित्वमा गर्नुभएका केटीहरूको लागि धेरै अस्तित्वमा अस्तित्व भएको थियो जुन उनीहरूको ओभरग्रेड जड पेंट थिएनन्। सबैभन्दा पहिले हलिवुड सेलिब्रिटी, जसले संसारलाई त्यस्तो केशले देखाउँछ, सारा जेसिका पार्कर - फिल्म "सेक्स र सिटी" को तारा थियो। त्यस पछि, धेरै ताराहरूले ओभरको प्रविधिको अनुसार अनुसार आफ्नो कपाललाई रङ्ग लगाउन थाले।
तर दाँतको यस प्रविधिको उपस्थितिको बारे अर्को कथा हो। उनी भन्छन् कि ओब्रो सर्भरको कारण देखा पर्दछ। उनीहरू गर्मीमा समुद्र तटमा बिताएपछि तिनीहरूका कपालहरू जलाए। जाडोबाट, प्राकृतिक रंग बढ्छ, तर सुझावहरू उज्ज्वल रहन्छन्। यसको विपरीत यस फ्रांसीसी स्टाइलिस्टहरूले मन पराएका थिए, जसले केवल रंग पूरा गर्यो। यसैले ओब्रो प्रविधिको लोकप्रियता सुरु भयो।
ओब्रो प्रविधिले यस्तो एउटा अचम्मको छवि सिर्जना गर्दछ जुन सबैको वरिपरिको ध्यान खिच्दछ। यो तथ्यलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ कि कपालको जरा पहिलो रंग हो, र केवल त्यसपछि सुझावहरू को नोकर हुन्छ। हाइलाइट भनेको सुझावहरू हल्का हुन्छन्।
यस तथ्यले यो किनेरलाई चित्रकारी रूपमा वितरित गरिन्छ, धुंधला पछि पछि, जडहरू र कर्लहरू एक स्पष्ट किनारा छैन। यसले छविलाई सजिलो र प्राकृतिक बनाउँछ।
रङको कुनै पनि तरिका यसको प्रविधि र विपक्ष छ। ओम्बो कुनै अपवाद छैन।
- रंगहरुको ठूलो चयन;
- सबै प्रकारको कपालको लागि उपयुक्त;
- यो प्रक्रिया प्राय: दोहोर्याउनुहोस्;
- महिलाको अनुहारको तीव्र विशेषताहरू सुचारु गर्न मद्दत गर्दछ।
- मध्यम बाल मा एक ombre बनाउन एकदम कठिन छ, र यस कपालको केही मालिकहरू सैलूनहरूमा जान्छन्;
यस प्रकारका दाँया पछि कपालको हेरविचार गर्न, यो गैर-सल्फेट युक्त कस्मेटिक्स प्रयोग गर्नु आवश्यक छ; हाम्रो बजारमा, दुर्लभ छ, र यसको मूल्य निकै उच्च छ;
- हप्तामा2पटकको लागि कपाल धुलाई कम गर्नु पर्छ;
- जब प्वाइन्ट लुगा लगाउँदा, छवि बेजोड देखिन्छ।
त्यस्ता प्रकारका ओम्बहरू छन्:
- जलाएको (कालो छायाँका लागि);
मध्यम बालहरुको लागि यस्तो एक ombre को लागि उजुरी को लागि आदर्श छ जुन उज्ज्वल हुन र सधैं ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ। यहाँ हामी दुई टोन धुमको प्रविधि प्रयोग गर्दछौँ। हजको प्यालेट सबैभन्दा साहसी विकल्प छन्: बैंगनी देखि रातो सम्म।
स्कैडिनेभियन ओमब्रो प्लैटिनम ब्लन्ड्सको लागी हो। हल्का आधारले बिस्तारै गाढा खैरो वा कालो सुझाव दिन्छ। काल्पनिक सुन्दर देखिने र बैजनीको छोरो लाइट हुनेछ। र छवि को चमक को लागि उनि एक क्रिम या कोरल छाया मा चित्रित गर्न सकिन्छ।
आज, क्लासिक विकल्प माध्यमिक कपालमा ओब्रो हुन्छ। यो लम्बाइको धारकहरू प्रयोगबाट डराउनु हुँदैन। को लागी मनपर्नेहरूको लागि, तपाइँ रङ्गहरूको अचानक परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। ठीक छ र सामान्यतया, औसत लम्बाइको कपालमा प्रविधिको ओब्रो मात्र रंगहरु को तीव्र परिवर्तन हुन सक्छ, तर पनि सुचारु हुन्छ। पछिल्लो विकल्प एक प्राकृतिक छवि प्राप्त गर्न चाहनेहरूका लागि अधिक उपयुक्त छ।
रंगको लागि तयार हुदैछ
ओब्रोको शैलीमा कपाल रंगाईका लागि आवश्यक सबै चीजहरूको सूची:
- कपालको लागि क्लियरफायर (प्राकृतिक रंग भन्दा बढी टोन हल्का लागि लिन्छ);
प्यान्ट (कांच वा प्लास्टिक) को लागी कन्टेनर;
- दाँतको लागि ब्रश;
- कङ्क (धातु छैन);
- कपालको लागि प्लास्टिकको क्लिप।
मध्यम लम्बाइको कपालमा धुरी ओम्बोको प्रविधि
पहिले तपाईंलाई आफ्नो कपाल संग सावधानीपूर्वक संयोजन गर्न आवश्यक छ। रंगको छनोट गरिएको रंग लम्बाइ सँग वितरित हुनुपर्छ। आफ्नो सबै कपाललाई एकचोटि डाई गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। तिनीहरूलाई ढालहरूमा फैलाउनुहोस्। जब अन्त्य पेंट गर्दै, मनमा राख्नुहोस् कि यो4देखि7सेन्टिमिटर लामो समय सम्म लाग्न उत्तम छ। यदि तपाईं बढी लिनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईंको कपालले यसको सबै प्रभावकारिता गुमाउनेछ। रंगीन सुझावहरू 15 मिनेटसम्म पन्नीमा लिपिन्छन्। अर्को, एकैछिन ढाँचा मात्र, थोडा अधिक मात्र। यो रंग लगभग 10 मिनेटको लागि राख्नुहोस् र2पटक दोहोर्याउनुहोस्।
त्यसपछि बालोंको कपालको कपालको कपाल (ठीर हावा) संग सुत्नुहोस् र यसलाई राम्ररी सुखार्नुहोस्। फेरि, पाना लिनुहोस् र राम्रो प्रभावको लागि सुझावहरूलाई हल्का पार्नुहोस्। खैर, गोरा कपाल को लागि ombre तैयार छ!
ओमेब निष्पक्ष बालों वाली बाल
यस प्रविधि को धुंधला पछि धेरै लोकप्रिय भए पछि सबै फैशनेबल महिलाहरु ब्यूटी सैलून आए। आज सर्वोच्च -कपालको कपालको मध्यम लम्बाईमा धेरै धेरै सामान्य छ।
हल्का खैरो कपालको स्वामी मूलतया निम्नलिखित टोनहरूमा सुझावहरू चित्रण गर्छन्: एम्बर, नट, हनी, गेहूं, कफी। तपाईं चकलेट टोन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो विविधता यसको कारण हो कि गोलाकार रंगहरु को सम्पूर्ण पैलेट संग अनुमोदन गर्दछ।
हल्का-कपाल कपालमा ओब्रो प्रविधिको लागि रङहरूको सबैभन्दा सफल संयोजन:
- जडहरूसँग गाढा रातो रंग हो - अन्त कालो;
- आशीर्वाद को जडहरु को तांबे मा चित्रित गरिन्छ;
- हनी रङ जडहरू - यो सुझावमा एक टेंगाइनइन रंग छ।
गाढा कपालका लागि ओम्बो
हल्का मध्यम कपालमा ओम्बोलाई हल्का रंगहरूको प्रयोगको साथ राम्रो गरिन्छ। यदि तपाईं प्राकृतिक हुनु चाहानुहुन्छ भने, यो प्राकृतिक छाया भन्दा बढी हल्का टोनहरूमा सुझावहरू रंग गर्न लायक छ। ओभरको प्रविधि लागू गर्नुहोस् मध्यम कपालमा कपालको सुझावहरू हल्का साथ सुरु हुन्छ । यस लम्बाइको मालिकले ठिनको स्तर तल कर्ल चमक गर्न सुरू गर्न उत्तम छ। जब ओक्सिडेंटले कपालमा आवश्यक समयको समय हुन्छ, यो राम्ररी पछाडिको हुनुपर्छ।
तेर्सो तेर्सो रेखाहरू छैनन्! सीमा असमान हुनु पर्छ। जराहरू अँध्यारो छायामा चित्रित छन्। हल्का अन्त्य र गाढा जडहरू बीचको सीमा मिश्रण गर्न यो वांछनीय छ।
कसरी धुरीको हेरचाह गर्ने?
सुझावहरू स्पष्ट रूपमा देखिन्छन्, तिनीहरू दाँया पछि सूखा हुनेछन् र बाली भन्दा बढी लगाम जस्तो हुनेछ। यसैले, यो शम्पोओस प्रयोग गर्न राम्रो छ, जुन रंगको कपालको लागि उद्देश्य हो। साथै, यो मास्क, बाल्म्स र कंडीशनरहरू प्रयोग गर्न अति उत्तम हुनेछैन। तिनीहरूले सुझावहरू जीवित हुन मदत गर्नेछन्।
यी सबै भन्दा प्रभावकारी छन्:
- विभाजन समाप्तहरू पुनःस्थापना गर्न विभिन्न सीरमहरू;
- तेलहरू भिटामिनको तुलनामा;
- प्राकृतिक मास्क, जहाँ अण्डा प्रयोग गरिन्छ।
- मास्क, जो जड मा आधारित छ।
राम्रो कपालको लागि छोटो कपाल कर्टकट
"फेड" (कपाल कट्टर): वर्णन। लोकप्रिय पुरुषहरु को कालीशैली
फैशनमा, ग्रेफाइटको रंग: को यो छायामा पुग्ने?
लामो कपालको लागि प्रोममा कपाल पसलहरू: विचारका लागि स्टाइलिश स्टाइल
शुरुवातका लागि बुनाई ब्रेड्स - रोचक विचार र योजनाहरू
शैम्पू "स्वतन्त्रता: पीला": समीक्षा, रचना, फायदाहरू र हानि
संस्थान। Herzen (ओन्कोलजी): समीक्षा
उर्लिएको मिट्टी - अमीर फसलको प्रतिज्ञा
रूसमा जनसांख्यिकीय अवस्था
हामी जडी बूटी घर मा वजन घटाने को लागि ले: के, के को लागि र कति
रचनात्मकता - जो विकसित गर्न सकिन्छ रचनात्मकता छ
भारत पहिलो चुनाव
Wok: ग्यारेन्टी स्वस्थ खाना को
पानी को लवणता के हो? विश्व महासागर को लवणता
एपिलेटर Braun सिल्क-epil 7: प्रक्रिया सहज छ
म उमेर 14 वर्ष एक बच्चा एक पासपोर्ट चाहिन्छ? कागजातहरू र सुविधाहरू
जब यो गर्भावस्था को समयमा पेट कम? गर्भावस्था को तेस्रो trimester